Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay shirmadaxeedka Jaamacadda Carabta ee Sharm El Sheikh “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
28 Maarso 2015, Sharm El Sheikh: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad qiimo leh ka jeediyay shir madaxeedka waddamada xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta oo maanta ka furmey magaalada Sharm El Sheikh ee dalka Masar.
Madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku xusey arrimo muhiim ah oo la xiriira xaaladda Soomaaliya iyo arrimaha kale ee ka jira waddamada Carabta.
Waxaa uu madaxweynaha u sheegay hoggaamiyeyaasha Carbeed in Soomaaliya oo haatan ka soo kabaneysa dagaalo sokeeyo oo muddo dheer qaatey, ay haatan sameysey horumar dhinacyo badan, sida siyaasadda, hirgelinta nidaamka federaalka, amniga iyo soo celinta adeegyada bulshada, wallow ay jiraan caqabado u baahan in wax laga qabto.
”Waxa inoogu muhiimsan dhammaan waxyaabaha aan qabaneyno wa nabadgelyada, dadaal badan ayaanna sameyney, walow kooxda nabadda ka soo horjeeda ay mar walba isku daydo inay carqalad abuurto. Waad wada maqasheen waxay shaley ka sameeyaan Muqdisho, iyagoo naf la caari ah ayay weerareen hotel ay ku sugnaayeen shacab dalkooda iyo dadkooda wax u qabanaya. Dad muhiim ah ayaan ku weyney, lakin taasi nagama hor istaageyso sii wadista dagaalka aan ku doooneyno inaan gebi ahaanba ku tirtirno, kooxda oo goobo yar haatan ku soo uruurey, ayna ka muuqato xaalad quus ah. Waxaana Jaamacadda Carabta ka codsaneynaa inay iyana gacan ka geysato sidii aan u dhameystiri lahayn barnaamijka dowladda ee amniga iyo xasilinta.”
Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka dalbaday Jaamacadda Carabta inay fuliso balanqaadyadii taageerada dhaqaale ee Soomaaliya, si wax loogu qabto hawlaha faraha badan ee dowladda horyaalla.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadley xasaradda ka aloosan Yemen oo uu sheegey in Soomaaliya ay si buuxda u taageersan tahay dowladda uu madaxweynaha sharciga ah ka yahay Abd Rabbuh Mansur Hadi, isla mar ahaantaana ay Soomaaliya si buuxda u taageersan tahay mowqifka Jaamacadda Carabta ee Yemen.
Waxaa kale oo uu madaxweynaha ka hadley qadiyadda Falastiin, dagaalka argagixisada caalamiga iyo xalinta mashaakilaadka ka taagan dalalka Carabta.
Hoggaamiyeyaasha kale ee Carabta ee iyaguna ka hadley kulan madaxeedkan ayaa iyaguna khudbadahooda ku xusey arrimaha Soomaaliya, sheegayna inay mar walba garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Amiirada Kuwait,Qatar,Urdun iyo madax kale “SAWIRRO”
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Amiirada Kuwait,Qatar,Urdun iyo madax kale "SAWIRRO"